Fitaovana haingon-trano: fitaovam-pananganana sy vokatra ampiasaina handravahana ireo trano sivily sy hazo isan-karazany hanatsarana ny asany sy ny hatsarany, ary hiarovana ny fitoniana sy ny faharetan'ny rafitra lehibe eo ambanin'ny lafin'ny tontolo iainana isan-karazany. Fantatra amin'ny anarana hoe haingon-trano ...
Ny mahasamihafa ny veneer aliminioma sy ny tontonana mitambatra aliminioma
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny veneer aliminioma sy ny tontonana vita amin'ny aliminioma dia mizara ireto manaraka ireto: ny famaritana samihafa, ny laharam-pahamendrehana ary ny toetra samihafa. 1. Famaritana samihafa (1) Ny veneer aluminium dia manondro trano d ...
Fanasokajiana ireo takela-plastika aliminioma
Misy karazany maro ny takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny aliminioma, ary karazan-fitaovana vaovao izy io, izay sokajiana matetika arakaraka ny fampiasana azy, ny asan'ny vokatra ary ny vokatry ny haingon-trano. 1. Voasokajy araka ny tanjona a. Takelaka plastika vita amin'ny aliminioma amin'ny fananganana rindrina ambainy ...